Dနေမင်း(နည်းပညာ): ♪ Wondershare Video Converter Ultimate v8.0.2.8 + Full Patch ♫
♪ Wondershare Video Converter Ultimate v8.0.2.8 + Full Patch ♫
Wondershare Video Converter Ultimate အသစ်ထွက်လာလို့ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ All In One Converter လို့ပြောလို့လည်းရပါတယ်ဗျာ။ ရုပ်ရှင်ကားတွေကိုအခွေလုပ်ချင်သူတွေအတွက် 10 DVD menu နဲ့ templates တွေပါတဲ့အပြင် Format ပေါင်း 158 မျိုးအထိပါဝင်ပါတယ်။ DVD folder, or ISO Files များကိုမိမိအလိုရှိသလိုထုတ်ယူနိုင်ပါတယ်။ Video များကို မိမိလိုချင်သလိုမျိုး ပိုင်းဖြတ်နိုင်တဲ့အပြင် ပိုင်းဖြတ်ထားတဲ့ Video အခန်းတွေကိုလည်း ပြန်ဆက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အခုထွက်လာတဲ့ Version မှာတော့ DVD Format ကို ဦးစားပေးပြီး Support လုပ်ထားပါတယ်ဗျာ။ DVD ကို ဦးစားပေးထားတယ် ဆိုပေမယ့် အခြားသော Format တွေကို မရဘူးလို့တော့မထင်နဲ့နော်။ အခြားသော Video Format များစွာကိုလည်း Convert လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ Converter တစ်မျိုးထဲလုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့မထင်နဲ့ နော်။ Video တွေ တင်ထားတဲ့ Websit များမှာလည်း Video တွေကို Download ဆွဲပေးနိုင်ပါသေးတယ်ဗျာ။ iPhone , iPad , နှင့် Android ဖုန်းများအားလုံးမှာ ကြည့်ရှုနိုင်မယ့် Video Format များဖြစ်အောင် Convert လုပ်ပေးနိုင် ပါတယ်။ အမြဲတမ်းသုံး နိုင်အောင် Full Version အဖြစ် Patch File ကိုပါ ထည့်ပေးလိုက် ပါတယ်ဗျာ။ အသေးစိတ်ကိုတော့အောက်မှာရှင်းပြပေးထားပါတယ်။
Wondershare Video Converter Ultimate အသဈထှကျလာလို့ မြှဝပေေးလိုကျပါတယျဗြာ။ All In One Converter လို့ပွောလို့လညျးရပါတယျဗြာ။ ရုပျရှငျကားတှကေိုအခှလေုပျခငျြသူတှအေတှကျ 10 DVD menu နဲ့ templates တှပေါတဲ့အပွငျ Format ပေါငျး 158 မြိုးအထိပါဝငျပါတယျ။ DVD folder, or ISO Files မြားကိုမိမိအလိုရှိသလိုထုတျယူနိုငျပါတယျ။ Video မြားကို မိမိလိုခငျြသလိုမြိုး ပိုငျးဖွတျနိုငျတဲ့အပွငျ ပိုငျးဖွတျထားတဲ့ Video အခနျးတှကေိုလညျး ပွနျဆကျပေးနိုငျပါတယျ။ အခုထှကျလာတဲ့ Version မှာတော့ DVD Format ကို ဦးစားပေးပွီး Support လုပျထားပါတယျဗြာ။ DVD ကို ဦးစားပေးထားတယျ ဆိုပမေယျ့ အခွားသော Format တှကေို မရဘူးလို့တော့မထငျနဲ့နျော။ အခွားသော Video Format မြားစှာကိုလညျး Convert လုပျပေးနိုငျပါတယျဗြာ။ Converter တဈမြိုးထဲလုပျပေးနိုငျတယျလို့မထငျနဲ့ နျော။ Video တှေ တငျထားတဲ့ Websit မြားမှာလညျး Video တှကေို Download ဆှဲပေးနိုငျပါသေးတယျဗြာ။ iPhone , iPad , နှငျ့ Android ဖုနျးမြားအားလုံးမှာ ကွညျ့ရှုနိုငျမယျ့ Video Format မြားဖွဈအောငျ Convert လုပျပေးနိုငျ ပါတယျ။ အမွဲတမျးသုံး နိုငျအောငျ Full Version အဖွဈ Patch File ကိုပါ ထညျ့ပေးလိုကျ ပါတယျဗြာ။ အသေးစိတျကိုတော့အောကျမှာရှငျးပွပေးထားပါတယျ။
With an ultra-intuitive user experience, anyone can easily convert video to 158 formats, including MOV, M4V, MP4, WMV, MKV, AVI, XviD,MPEG, DVD-Video, FLV, 3GP and load more--perfect to fit your iPad(iPad Air, iPad mini2included), iPhone(iPhone5included), iPod(iPod Touch5included), android,windows Phone,PSP, Xbox 360 andarainbow of other devices.
Convert Home DVD to various video formats
With Fast conversion speed and high quality conversion, you can easily convert Home DVD movies to video in MP4, MPG, WMV, 3GP, FLV, and tons of other formats. Or, if you want to watch movies on the go, convert them to optimized device formats with great image quality for playback on iPad(iPad Air, iPad mini2included)/iPhone/iPod,Andriod devices and more.
Burn multiple files simultaneously in batch
With Wondershare Video Converter Ultimate, trimming and clipping the perfect video is just easy. More editing power under the hood lets you edit and personalize video using classic features including cut, merge, crop, trim(multi-trim function supported), rotate, add watermark, adjust duration, etc. Touch up video with up to ten effects, making audio/video editing fun. Add text, photos, and stitch together all types of media including videos, audio, images and color slides. Now it's easy to make the perfect home movie.
Posted by Thu Rein at 5:15 AM